महाशिवरात्रीको रात सुत्नु हुँदैन, हेर्नुहाेस् राति नै देखि पशुपति क्षेत्रमा के भइरहेकाे छ (लाइभ भिडियो) – PathivaraOnline
Home > धर्म सँस्कृति > महाशिवरात्रीको रात सुत्नु हुँदैन, हेर्नुहाेस् राति नै देखि पशुपति क्षेत्रमा के भइरहेकाे छ (लाइभ भिडियो)
admin February 21, 2020 धर्म सँस्कृति, भिडियो	0
अधिकांश मानिसहरु शिवरात्रीको दिन भगवान शि,व,को आराधना गर्छन् तर धेरैलाई यो थाहा नहुनसक्छ त्यसदिन शिवको आ,रा,ध,ना किन गरिन्छ ? धेरैको बुझाइ एकै नहुनसक्छ । कोहि भगवान शिवलाई खुशी पारी वरदान लिनका लागि त कोहि अरुले गरेको देखेर पनि गर्छन् । तर यसको मुख्य कारण भने अर्कै छ । पूर्णिमाको अघिल्लो दिन सबैभन्दा अँध्यारो रात हुन्छ । जसलाई शिवरात्रीको नाम दिइन्छ । वर्षमा १२ देखि १३ वटासम्म शिवरात्री हुन्छ ।
तर माघ महिनामा आउने शिवरात्रीलाई महाशिवरात्री भनिन्छ । त्यस रात कोहि पनि सुत्नु हुँदैन भन्ने प्रचलन रहिआएको पाइन्छ । महाशिवरात्रीको अँध्यारो रातमा ग्रहको स्थिति यस्तो हुन्छ कि जहाँ मानव प्रणालीमा एक शक्तिशाली उर्जा प्राप्त हुन्छ । सो दिन रातभर ऊर्ध्वाधर स्थितिमा जागा बसेमा शारीरिक र आध्यात्मिक भलाइका लागि लाभदायक हुन्छ । यसकारण योग परम्पराका अनुसार महाशिवरात्रीको रात कुनैपनि मानिस सुत्नु हुँदैन ।
हिमानीकाे यस्तो भावना बाहिरियो : उज्यालो मुहारमा सधैँ मुस्कान लिएर हिडेपनि भित्री हृदयमा के भैरहेकाे छ? (हेर्नुस् भिडियो)